warkii.com » Da&rsquo;yarkii La Isku Haystay Ee Kai Havertz Oo Go&rsquo;aan Dhab Ah Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa, Chelsea Oo Heshay Warkii Ay Doonaysay & Naadiyada Kale Kula Tartamaya
Da&rsquo;yarkii La Isku Haystay Ee Kai Havertz Oo Go&rsquo;aan Dhab Ah Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa, Chelsea Oo Heshay Warkii Ay Doonaysay & Naadiyada Kale Kula Tartamaya
Da’yarka reer Germany ee Kai Havertz ayaa go’aan ka gaadhay mustaqbalkiisa, waxaanu u caddeeyey Bayer Leverkusen in aanu xili ciyaareedka dambe sii joogi doonin oo uu ka tegayo.
21 jirkan oo ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan qaaradda Yurub ee da’diisa ah, waxa uu soo jiitay kooxo badan oo ka mid ah haldoorka Yurub, kuwaas oo isha ku hayay in muddo ah.
Liverpool, Bayern Munich iyo Real Madrid ayaa muujinaya damacooda, laakiin kooxda reer England ee Chelsea ayaa la sheegayaa inay naadiyada kale kaga horreyso tartanka Kai Havertz.
Wargeyska caanka ah ee kasoo baxa UK ee The Guardian ayaa soo bandhigay go’aankii ugu dambeeyey ee ciyaartoygan oo farxad gelinaya Chelsea, waxaanu sheegay in wakiillada Kai Havertz ay si buuxda uga war hayaan in Blues ay xiisaynayso inay 21 jirkan la wareegto marka uu suuqu si rasmi ah u furmo.
Chelsea oo hore ula soo wareegtay Hakim Ziyech iyo Timo Werner, waxay u xadhko xidhanaysaa Havertz oo Lampard uu doonayo inuu ka dhigo saxeexiisa saddexaad ee uu ku dhowaaqayo ka hor inta aanu xili ciyaareedka dambe bilaabmin.
Laakiin qiimihiisa oo kor u dhaafaya 100 milyan oo Euro ayaa kooxaha qaarkood albaabada ka xidhay, gaar ahaan Bayern Munich oo si cad u sheegtay in aanay awoodi karayn inay bixiso lacagta ay Leverkusen ku doonayso in lagaga iibsado xiddigan da’da yar.
Wararka ka imanaya Jarmalka ayaa sheegaya in Bayer Leverkusen aanay ku qasbi doonin Havertz inuu sii joogo, isla markaana ay hadda hayaan hal dalab oo dhamaystiran oo kasoo gaadhay mid ka mid ah naadiyada sare ku xusan.
Kooxda dalabka dhiibtay oo lagu sheegay ina tahay Chelsea ayaa Leverkusen u bandhigtay 80 milyan oo Euro, taas oo 20 milyan ka hoosaysa inta ay dalbanayso, laakiin waxay dhibaato ka joogtaa kooxda reer Germany oo ku adkaysanaysa in aanay tanaasul ka samaynayn qiimahan.
Reiner Calmund oo hore agaasime ugu soo ahaa Leverkusen ayaa rumaysan in kooxdiisa hore ay ku adkaysan doonto in aanay gorgortan ka gelin qiimaha 100 milyan ee Euro ah.
Si kastaba ha ahaatee, go’aanka Kai Havertz ee ah inuu ka baxo kooxdiisa xagaagan ayaa keeni doona in Leverkusen ay dhegaysato dalabyada u imanaya, waxaana la sheegayaa in da’yarkani uu doonayo inuu ka ciyaaro Ingiriiska, taas oo niyadda usii dhisaysa Chelsea, halka Real Madrid iyo Bayern Munich ay caqabad ku tahay.